Interview with Ashok Byanju | ५ वर्षभित्र धुलिखेल नगरबासी आत्मनिर्भर बन्नेछन् : अशोक व्याञ्जू
Thursday, 18 October 2018 01:51 am, Nepal
मेचीकाली : 2017-04-24 16:54:24
धुलिखेल नगरपालिकाका पुर्वमेयर अशोक व्याञ्जु आगामी स्थानीय तहको चुनावमा नेकपा एमालेको तर्फबाट धुलिखेल नगरपालिकाका मेयरका उम्मेदवार चयन भएका छन् । नेपाल नगरपालिका संघका उपाध्यक्ष, नेकपा एमाले काभ्रेका उपाध्यक्षसमेत रहेका व्याञ्जु विकासप्रेमी नेताको रुपमा परिचित छन् । प्रस्तुत छ धुलिखेल नगरपालिकाको मेयरमा उम्मेदवार चयन भएपछि उनको विकासका योजना, नगरभित्रको समस्या र समाधान लगायतका विषयमा गरिएको कुराकानी
हिजोको धुलिखेल, आजको धुलिखेल र अबको धुलिखेलको विषयमा के सोच बनाउनुभएको छ ?
स्थानीय तहको निर्वाचनपछि जनताका आकांक्षा र आवश्यकताहरु पूरा हुन्छन् ?
जहाँसम्म आर्थिक कुराको सवाल छ, संविधानमै राजस्व बाँडफाँड तथा व्यवस्थापन आयोग भन्ने बन्छ, त्यसले देशभरीका आम्दानीहरुलाई एकठाउँमा ल्याउँछ । त्यो आम्दानीको आधारमा केन्द्र सरकारले कति बजेट दिने ? प्रदेश सरकारले कति बजेट दिने ? गाउँ पालिका र नगरपालिकाले कति बजेट दिने ? त्यसका आधारहरु त्यसले निर्माण गर्छ । मापदण्डहरु निर्माण गर्छ । त्यो मापदण्डहरु निर्माण भएको आधारमा नगरपालिका, गाउँपालिका र प्रदेश केन्द्र सरकारलाई बजेट व्यवस्थापन हुन्छ । राष्ट्रिय आयको आधारमा । त्यो एउटा अंश स्थानीय जनताहरुद्धारा प्रांप्त हुने आम्दानी र विश्वका धेरै देशहरुको अन्तराष्ट्रिय डोनर संस्थाहरु जसले दुर्गम र शहरी क्षेत्रहरुमा जनताका आवश्यकता परिपूर्ति गर्न, त्यहाँको गरिबी निवारण गर्न, त्यहाँका जनतालाई खानेपानी, शिक्षा स्वास्थ्य लगायतका क्षेत्रमा सहयोग गर्नका लागि जुन आधारहरु तयार गरेर डोनरहरुले योजना तर्जुमा गर्छ ति क्षेत्रहरुमा धेरै पहिचान र धेरै जानकार र धेरै घुलमिल भएका आधारमा म अरु नगरपालिकाको तुलनामा सबैभन्दा बढी बजेट धुलिखेल नगरपालिकामा ल्याउन सक्छु । काभ्रे जिल्लामा ल्याउन सक्छु । हाम्रो देशमा पनि ल्याउन सक्छु भन्ने आत्मविश्वास म सँग छ । त्यो आत्मविश्वासले मलाई एउटा नमूना नगरपालिका, स्वच्छ नगरपालिका, वातावरणीय रुपमा स्वच्छ, आर्थिक रुपमा समृद्ध, अरु नगरपालिकाहरुको तुलनामा सम्मानीत र आम जनताको सहभागितामा नयाँ धुलिखेल नगरपालिका बनाउनेछौं । त्यो धुलिखेल भनेको १ देखि १२ वडा सम्मको धुलिखेल हो । हिजोको र आजको धुलिखेल होइन । सबै एउटै हुन् । कुन वडामा, कुन टोलमा, कुन गाउँमा को मान्छेलाई के चाहिन्छ ? दुईवटा कुरामा आधारित हुन्छ । एउटा चाहनाको आधारमा विकास निर्माणहरु गर्ने, अर्काे आवश्यकताका आधारमा विकास निर्माण गर्ने । यस्तै आधारमा आफैले निर्माण गरेको, आफैले सिर्जना गरेको, आफैले उपभोग गरेको, आफैले संचालन गरेको एउटा स्वायत्त, स्वतन्त्र र समृद्ध नगरपालिका बनाउने अभिलाषा छ । त्यो अभिलाषा ५ वर्षभित्र हामी पूरा गर्छाैं । हाम्रो पार्टी नेकपा एमालेले पूरा गर्छ । त्यसको भौतिक रुपमा उपस्थिति हाम्रा पार्टीका उम्मेदवारहरुले त्यो काम गर्नका लागि इमानदारीताका साथ काम गर्न सक्छ र मैले विगतमा ५ वर्ष नगरपालिकाको उपप्रमुख हुँदा कुनै पनि जनप्रतिनिधिलाई १ रुपैयाँ पेश्की लिन पाउदैन, आर्थिक कारोबारमा संलग्न गराइनँ, त्यसको कारणले नेपालको ५८ नगरपालिकामध्ये सबभन्दा आर्थिक रुपमा स्वच्छ नगरपालिकाको रुपमा स्थापित गराउन सकें । त्यो काम अब पनि कुनैपनि नगरपालिकाको निर्वाचितहरुले कुनैपनि बजेटमा उसको अंशियारी हुनेछैन, उसको सहभागिता हुनेछैन र जनप्रतिनिधिहरु आर्थिक रुपमा स्वच्छ रहने, भ्रष्टाचारमुक्त नगर बनाउने काम हामी गर्छाैं । विगतका दिनहरुमा नगरपालिका र गाउँ विकास समितिमा काम गरेका अनुभवी जनप्रतिनिधिहरुको सहभागितामा त्यहाँको उद्योग, व्यापार, व्यवसायिहरुको सहभागीतामा, त्यहाँका बुद्धिजीवीहरु, बौद्धिक क्षेत्रका व्यक्तिहरुको सल्लाह सुझावमा राजनैतिक दलहरुसँग पनि कुनै पूर्वाग्रह नराखीकन निर्वाचित भैसकेपछि पनि हामी सबै दलका साथीहरुका विचार दृष्टिकोणहरुलाई सम्मान गर्दै एउटा सम्मानित लोकतन्त्रको अभ्यासद्धारा धुलिखेललाई नेपालको नमूना नगरपालिका बनाउने उद्घोषका साथ अगाडि बढेको छु । यो उद्घोषलाई आम धुलिखेलबासीहरुले साथ र सहयोग दिनेछ भन्ने कुरामा विश्वस्त छु ।
विकट क्षेत्रलाई नगरपालिकामा गाभेपछि जनताहरुमा थप दायित्व थपिएको भन्ने गुनासो छ नि ?
स्वभाविक रुपमा नगरपालिकाको सिद्धान्त के छ भने अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव र नगरपालिकाहरुको संसारभरी सिर्जना भएको आधार नै करमा आधारित हो । गाउँहरु सबै रुपमा सक्षम हुँदैन । शहरहरु सम्पूर्ण रुपमा सक्षम हुन्छ । त्यसैले नगरपालिका विश्वको अनुभवको आधारमा गैरकृषि क्षेत्रहरु नगरपालिकाका रुपमा विकास हुन्छ जहाँ उद्योगधन्दा, व्यापार, व्यवसाय, सेवामूलक कामहरुको आधारमा त्यहाँको आर्थिक विकास भएको क्षेत्रहरु आर्थिक रुपमा समृद्ध भएको क्षेत्रहरु नगरपालिका हुन्छ । शासन प्रक्रियाद्धारा सुशासन प्रदान गरेर जनताको आवश्यकता परिपूर्ति म गर्छु र मेरा लागि जनताहरुले आर्थिक सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने आधारमा त्यो आर्थिक सहयोगलाई कर प्रणाली आयस्रोतको आधारमा कर प्रणालीको व्यवस्थापन गरेको र उसले करद्धारा नगरपालिकालाई आर्थिक समृद्ध बनाउने, नगरपालिकाले जनताको करद्धारा जनतालाई विकासका आवश्यकताहरु परिपूर्ति गर्ने । यो समझदारीमा नगरपालिकाको सुशासनको प्रक्रिया आर्थिक विकासको पद्दतिहरु सुरु हुन्छ । यो त भयो अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवहरु ।
हाम्रो देशमा के हो भन्दा सबै गाउँहरु हुन्, शहरहरु सीमित छ । विश्वमा धेरै ठाउँहरुमा पहिला शहर निर्माण गरेर जनतालाई राखेर बसोबास गराएर अनि त्यो शहरलाई व्यवस्थित गरेका ठाउँहरु पनि छन् । हाम्रो देशको इतिहासमा काठमाडौं महानगरपालिका, ललितपुर महानगरपालिका राणाशासनकालमै नगरपालिका भएको हो । तर त्यो व्यवस्थित थिए । बाँकी क्षेत्रहरुको सवालमा विस्तारै विस्तारै विकास भएको शहरहरु हो । हाम्रो देश आधुनिक विकासको, आधुनिक अनुभवको, आधुनिक पद्दति र प्रणाली रुपमा हामी राणाशासनका कारण शिक्षामा पछाडि प¥यो, पञ्चायतकालले गर्दा हाम्रो पद्दति र प्रणालीहरु एकांकी भए । त्यसले गर्दा हाम्रो व्यवस्थित शहरको अवधारणा हुन सकेन । त्यसोभएर नेपालको राजनीतिक प्रणालीले के अबलम्बन ग¥यो भने अहिले भएका क्षेत्रहरुलाई नगरपालिका र गाउँपालिका बनाएर स्वायत्त दिऊँ । त्यो स्वायत्तता अभ्यासद्धारा प्रजातन्त्र र स्थानीय जनताहरु लोकतन्त्रप्रति अभ्यासित र अनुभव प्राप्त गरुन् । त्यसका आधारहरु केन्द्र र प्रदेशका सरकारहरु भोलि चलाउने नेतृत्व विकास पनि हुन् । जनताका आवश्यकता परिपूर्ति गर्नलाई अहिले नगरपालिका बनाइदिऊँ । नगरपालिका बनाइदिइसकेपछि पछि अन्तर्राष्ट्रिय, राष्ट्रिय र स्थानीय बजेट परिचालन गर्न र त्यो ठाउँलाई शहरका आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने जिम्मेवारी दिऊँ । त्यो जिम्मेवार प्राप्त आधारभूत आवश्यकताले विस्तारै विस्तारै शहरीकृत बनाउँदै जाने भन्ने अवधारणा आएको छ । शहर बनाएर शासन प्रणाली लागू गर्ने कि शासन प्रकृया लागू गरेर शहर बनाउने भन्ने अन्तर्गत शासन प्रकृया लागू गरेर शहर विकसित गर्दै जाने भन्ने कुरा आएकाले जनताले पक्कै पनि अलिकति आर्थिक मार पर्छ । हाम्रो शहरहरु सीमित छ, उद्योगधन्दा, व्यवसाय सीमित छ, तर ग्रामीण क्षेत्र धेरै छ । त्यसैले ग्रामीण क्षेत्रको विकास र शहरी क्षेत्रको विकासलाई गाउँ नगर साझेदारी अवधारणा अन्तर्गत गाउँले उत्पादन गरेको शहरका लागि शहरले आम्दानी गरेको गाउँका लागि यो हाम्रो सौहार्दता पैदा गरे विकास एक आपसमा परिपूरक छ भन्नका लागि हो ।
त्यस्तै जनताको स्वास्थयको मध्यनजर गर्दे स्वास्थ्य केन्द्रित योजनाहरु बनाउने । अहिले सबैभन्दा बढी खर्च स्वास्थ्यमा हुन्छ, छोराछोरी पढाउनमा हुन्छ, बुढाबुढीहरुलाई व्यवस्थापन गर्नेमा हुन्छ । अनुत्पादक तर राज्यले संरक्षक भविष्यका लागि गर्नुप¥यो र हिजो समाज निर्माणमा योगदान गरेकालाई सम्मान गर्नुपर्ने जिम्मेवार पनि स्थानीय सरकारको हुन्छ । स्वास्थ्यमा वीमा अबलम्बन गर्ने, शिक्षामा सरकारले निःशुल्क भनेको छ, दलितहरुलाई उच्च तहसम्म निःशुल्क भनेको छ । निःशुल्क भयो भन्दैमा गरिबहरु स्कूल आउन सक्दैनन भने उसको गरिबी निवारण कसरी गर्ने ? यो कुरा पनि जोड्नु पर्छ । शहर भनेको व्यवस्थित आवास क्षेत्र पनि हो । त्यसैले उसको भूउपयोग नक्सा सँगसँगै हामीले कानुन बनाउनुपर्छ, मापदण्ड बनाउनुपर्छ, आचारसंहिता बनाउनुपर्छ । यसकारण सेवाका लागि कर तिर्नुपर्छ । तर धुलिखेलको बजारको मान्छेले जति कर तिर्छ त्यति नै पैसा पातलेखेको मान्छेले तिर्दैन नि । तिराउनु पनि हुँदैन ।
त्यसैले जनताको आयमा आधारित कर हुन्छ । सम्पत्तिमा आधारित कर हुन्छ । जनतालाई दिइएको सेवामा आधारित कर हुन्छ । तर त्यो कमजोरलाई कम कर हुन्छ । सेवा धेर लिनेलाई धेरै कर हुन्छ । त्यसकारण प्रगतिशील कर लागू हुन्छ । यसले जनतालाई बोझ हुँदैन । अब नगरपालिकाको व्यवस्थित शहर भनेकै आवासमा केन्द्रित, सेवामा केन्द्रित, उद्योगधन्दामा केन्द्रित हुने भएको हुनाले त्यो कामको लागि हामीले नक्सा पास गर्दा खेरी कर तिर्नुपर्छ । धुलिखेल बजारमा बनेको घरको कर र शंखु र देवीटारमा बन्ने घरको कर फरक हुन्छ । त्यसैले ग्रामीण क्षेत्रका जनताहरुलाई करद्धारा मार पार्ने होइन करलाई उनीहरुले बानी पार्ने मात्र हो । त्यसरी हामी शासन प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्छौं ।
यो नगर र गाउँपालिकाको चुनाव सुशासनको हिसाबले, पारदर्शिताका हिसाबले, स्थानीय लोकतन्त्रको हिसाबले शहरलाई हिजोको होइन, आजको आधुनिक शहर, आधुनिक गाउँ, जनतालाई अधिकार सम्पन्न, जनतालाई समृद्ध बनाउने, जनतालाई सम्मानित बनाउने र नेपालको मुहार फेर्ने जुन अवसर प्राप्त भएको छ । यसमा मतदान गर्दाखेरी सक्षम, योजनाबद्ध काम गर्नसक्ने, हिजोको तुलनामा आज आधुनिक र व्यवस्थित गर्न सक्ने योग्य उम्मेदवारलाई छान्नुहोला । जसले विकास गर्छ र हाम्रो समृद्धिलाई अगाडि ल्याउन सक्छ ति सम्भावना भएका नेतृत्वहरुलाई छान्नुपर्छ त्यसतर्फ आमजनताले आफ्ना मत व्यक्त गरेर नेकपा एमालेलाई सूर्य चिन्हमा मतदान गरेर विजय गराउनुहोला । मेरो अनुरोध छ ।